Spotify u Mac? Maqaalkani waxa uu u xaliyaan arrimaha oo dhan
Spotify u Mac? Guide Tani Furfuraya All Arrimaha Your
Spotify waa adeeg geeyo music bixiya malaayiin songs ugu helaan in dadka isticmaala ay. Iyadoo buugga ugu weyn ee la heli karo, Spotify waxay bixisaa ururinta ugu weyn ee songs, kaas oo noqon kara ciyaaray labada online ama offline . Spotify waxaa laga heli karaa barnaamijyada kala duwan iyo dhufto ee foomka of Mac, Windows, iPhone, Android iyo dadka kale oo dhan, codsiga taageeraa oo dhan dhufto ee la heli karo iyo bixiyaa qaababka unmatchable meel kasta.
Qeybta 1: Spotify u Mac
Qeybta 2: Download Spotify Mac
Qeybta 3: Ku rakib Spotify Mac
Qeybta 4: uninstall Spotify Mac
Qeybta 5: Talooyinka airplay Spotify Mac iyo Spotify fog Mac
Qeybta 6: Sida loo casriyeeyo Spotify Mac
Download music Spotify lacag la'aan ah Mac la TunesGo
Qaybta 1aad : Spotify u Mac
Nidaamka Mac Operating waxaa ugu duceeyey Platform ku Music la jecel yahay oo ah qaab Spotify.
1) Spotify Free Mac
Spotify Free Mac waa version xorta ah ee Spotify, taas oo ah sidii kasta oo kale oo lacag la'aan ah version nidaam kasta oo Operating kale Spotify. Iyadoo qaar ka mid ah xad la Spotify Free ah, fursadaha yar yar marka la barbar dhigo ka version on Mac Spotify Premium ee version lacag la'aan ah.
Spotify Beta Mac waa nooca ugu dambeeya ee Spotify ujeeddo ah Mac iyo Windows users, kaas oo u ogolaanaya dajinta, tijaabiyay, oo waxay siiyaan aragti ah oo ku saabsan nooca ugu dambeeya beta codsiga desktop ay? Farqiga u leh Beta Spotify ee Mac waa muuqaalka kore ee interface User ah. Bar ayaa hogaanka fallaadhihii sanduuqa raadinta iyo navigation, oo ay la socdaan bar hoose kontaroolka ciyaaryahanka yihiin wax yar ka weyn, oo leh astaanta weyn u waafaqayaan.
Eeg dhowr snapshots isbedelada iyo dareemayaa faraqa aad iskaa.
Habka degsado Spotify bilaabmaa talaabada ugu horeysa ee diiwaangelinta on account Spotify. Sida ugu dhakhsaha badan ee aad iska diiwaan koontada, aad wareejiyey bogga meesha rakibo ee Spotify ee Mac bilaabmin. Wixii geeddi-socodka download ee Spotify ee Mac, raac tallaabooyinka hoos ku xusan.
Haddii faylka u bilawday si toos ah ama aad gacanta download it, biraawsarkaaga jirtey ayaa aad si loo badbaadiyo file Spotify.dmg ah.
In browser Firefox, riix Save File si loo xaqiijiyo mooyaane, Si kastaba ha ahaatee fariinta duwan tahay kuna xiran browser aad u isticmaasho. File waxaa lagala soo bixi oo aad si cad u arki kartaa in qaybta download.
Laba-guji file ah in la furo file ka soo dejisan
Sida ugu dhakhsaha badan inaad ku labanlaabtaa guji file ka soo bixi, suuqa kala muuqataa taas oo jirtey ayaa aad u jiidi icon Spotify si aad Codsiyada gal sida ku cad sawir hoose.
Click icon daaqadan oo jiidin folder Codsiyada ku cad socota, waxa uu
Sanduuqa hadal A ka muuqdo, si cad u sheegin farriin ah in Spotify aan la dhaqaajin karin tan iyo Codsiyada aan la bedeli karaa
Xaaladdan oo kale, digniin sanduuqa wada hadal u muuqataa, guji sugee iyo isgarad-galaan maamulka iyo password in sanaadiiqda qoraalka lagu siiyey. Markaas riix kaliya Log In inay ansixiso habka iyo rakibi barnaamijka.
Sanduuqa A hadal ka muuqdo weydiisanaya ansixinaya adiga haddii Spotify heli kartaa keychain
Sidaas darteed, Riix u ogolaanayaa in si in la bixiyo Spotify in aad keychain
Your keychain waxaad badbaadin kartaa ka qabo inuu soo galo password maamulaha mar kasta oo aad furi barnaamijka. Laakiin waxaa laga yaabaa in aad u baahan tahay si ay u hawgu marka software ah uu hadda iyo mar kasta la cusbooneysiiyaa.
Spotify hadda lagu kaydiyaa aad Codsiyada folder
Hadda, waxay ku xiran tahay in aad on haddii aad rabto in la abuuro link a waxa ay si aad xirto adigoo gujinaya soo jiiday icon
Qeybta 4 : uninstall Spotify Mac
Si uninstall Spotify aad Mac, waxaad u baahan tahay oo dhan waa inay raacaan talaabooyinkan yar oo sahlan, kuwaas oo hoos ku qoran
Si aad u bilowdo hawsha ee un-rakibidda aad u baahan tahay in ay si buuxda uga baxdo Spotify. Waayo, tan u tagaan oo ay u menu Spotify ka dibna riix 'Jooji'. Marka aad ka tago Spotify oo hadda lama muujinaya aad bar barnaamijka, waxaad uninstall karo.
Kaddibna waxaad u baahan doontaa inaad furto bar Finder menu iyo hoos Taga ', kaliya aad u ogaato maktabadda. Haddii aad maktabadda waa kuma arki karo, ka dibna riix furaha alt oo ka muuqan doontaa. Marka aad guji maktabadda, folder maktabadda furi doonaa, kuu oggolaadaan in aad si ay u helaan waxyaabaha ku jira.
Sida ugu dhakhsaha badan aad ku sugan tahay maktabada, tag Cache iyo tirtirto folder Spotify ah. Qoraalkan waxaa laga heli karaa sida 'com.spotify.client' oo aad xaq u riixi kartaa in ay tirtirto ama aad gacanta ay jiidi karaan in folder qashinka aad.
Hit button dhabarka iyo marka aad dib ee maktabadda yihiin. Haddaba tag si aad Codsiyada folder iyo sida ugu dhaqsaha badan aad ku jirtid qaybta Codsiyada, tirtirto folder Spotify ee ka codsiyada. Wixii habkan aad, aad kartaa click midig oo dooro 'tirtirto' ka menu ama aad gacanta jiidi karaan gal ah in aad qashinka, la mid ah sida ka hor. Hoos waxaa ku qoran shaashada ee la mid ah.
Fur u heli menu oo dooro 'aamin qashinka madhan ". Tani waxay hubisaa in faylasha lagu tirtiray ammaan ka your computer ka dhigi doonaa. Eeg shaashada ee la mid ah.
Marka aad ka shubeen aad qashinka, waxaad u baahan doontaa in computerka aad iyo mar aad samayn, Spotify lagu gebi ahaanba laga saaro doonaa your computer.
Spotify lagu ciyaari karo Mac OS X. Iyadoo music geeyo oo laga helay ilo kale sida Spotify ama Slacker ah, Airplay yimaadaa si gurmadka. Waxay awood u geeyo ee audio oo dhan ka Mac isticmaalaya AirPlay.
Sida loo isticmaalo Spotify airplay Mac
Ujeedada ay u isticmaalaan Spotify airplay Mac, waxaad u baahan tahay oo dhan waa in la beddelo wax soo saarka audio aad Mac. Tallaabada ku xusan waa sida soo socota
Play aad music Spotify ee app Spotify ah
Double riix badhanka guriga ku iDevice ah
Buugga al sida ugu tagay si ay meesha slider mugga waxaa lagu soo bandhigay
Tubada icon AirPlay ah
Spotify on AirPlay
Habka Update ee Spotify ee Mac waa wax la mid ah Windows ah. Laakiin mar walba xasuuso inaad socodka ah ee gacanta Block auto-hoos aad Spotify.
Haddaba habka update ka, isticmaali rakibayo rasmiga ah kaas oo lagala soo bixi karaa website-ka rasmiga ah ee Spotify oo ay sii wadaan ee update sida habka update kasta oo kale oo fudud oo ah arjiga kasta oo kale.
Spotify Client for Windows Mac Linux iyo macruufka iyo Android
> Resource > Spotify > Spotify u Mac? Guide Tani Furfuraya All Arrimaha Your